क्वारेन्टाइनमा बस्न नपाएपछि कुखुराको खोरमा | langtangnews.com
रसुवा, स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा आश्रय नपाएपछि उत्तरगया गाउँपालिका- ५ का एक युवा कुखुराको खोरमा क्वारेन्टाइन बसेका छन् ।
प्रतिनिधी सभा सांसद मोहन आचार्यको घरमा निर्माण भएको क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट फर्किएका युवाले आश्रय नपाएपछि कुखुराको खोरलाई नै आश्रय बनाएर अहिले रात गुजारिरहेका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका- ५ निवासी गणेश आचार्य यस्ताे बिचल्लीमा परेका हुन् । आचार्य रोजागारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेका थिए । भारतमा समेत कोराना संक्रमितहरुको संख्या बढेसँगै उनी अरु नेपालीहरु झैं स्वदेश फर्किए । तर अरु झैं लुकेर घर पस्न गएनन् । बरु क्वारेन्टाइन खोज्दै गए । थाहा पाए जिल्लाकै संघीय सांसद मोहन आचार्यको घरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको । यो चाल पाएर उनी सो क्वारेन्टाइनमा बस्न पुगे । तर त्यहाँ आरडिटी परीक्षण नभएको नाममा उनलाई सास्ती दिइयो ।
त्यहाँ बस्न नपाएपछि उनी आफ्नै घरमा फर्किए र कुखुराको खोरलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएर अहिले त्यही खोरमा रात गुजारिरहेका छन् ।
उनी आफैं गाउँपालिकामा रहेको सांसद मोहन आचार्यको घरमा अबस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्न पुगे । तर त्यहाँ बस्न दिइएन् । अनेक बाहना बनाएर त्यहाँबाट धपाइयो । आफ्नै गाउँपालिकामा रहेको सांसदकै घरमा अवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्न नदिएपछि उनी घर फर्किए । र उनका बुवाले कुखुरा पालनका लागि बनाएको खोरलाई क्वारेन्टाइन बनाएर अहिले त्यही रात गुजारिरहेका छन् ।
पहिले त केही स्थानीय तहलाइ असफल बनाउनु थियाे अहिले नजिककै छिमेकीले बस्न नपाएपछि क्वारेन्टाइनकाे औचित्य के हो स्थानीय प्रश्न गर्दछ ? केही समय अघि तामझामका साथ रसुवाका साम्सद मोहन आचार्यको घर क्वारेण्टाइन बनाएको खबर सामाजिक संजालमा ब्यापक प्रचार भयाे । तर संक्रमितहरू राख्न नहुने भए कस्ताे क्वारेन्टाइन हाे स्थानीयले भने । स्थानीय तहमा नै क्वारेन्टाइन भएकाेले त्यहाँ राख्न्र पर्छ तर त्यहाँ किन राखिएन ? स्थानीयकाे प्रश्न छ ।